အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် ထွက်ပေါက်...
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:35 AM
You doing well, BlackDream..,
Regularly posting in your blog.., Which is good!!
Happy Myanmar New Year 1370!!
ထွက်ပေါက် မဲ့နေတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောသော့ဟာ “စိတ်” ဖြစ်တယ်..။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းမမြင်တဲ့ ငါ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေမဲ့အစား..။ ငါ့ဝိဥာဉ်ကိုပဲ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်တော့မယ်…။
ငါ့စိတ်တွေလည်း အဲဒီ့လိပ်ပြာနဲ့အတူ လောကသစ်ဆီသို့….။ တကယ်တော့ သေခြင်းတရားဆိုတာ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းတစ်ခုပဲ မဟုတ်လားဗျာ…။ ===
သေခြင်းတရား ကိုထွက်ပေါက် အဖြစ် ရွေးချယ် တာ လူညံ့တွေ ရဲ့အလုပ် ထွက်ပေါက် မရှိဘူး ဆို တာမရှိဘူး ထွက်ပေါက် ကိုမတွေ့ သေးတာဘဲ ရှိမယ်..နောက်ဆုံး မတွေ့ ရင် ဖောက်ထွက် ရမယ်..အလျှော့ပေးဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ ....။ွ
Well done Mi Amigo.. if death were the only choice we have, I would join with you too :P
keep up with great works/thoughts....
အစ်ကိုရေ ဒီစာထဲမှာ အငွေ့အသက်တချို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗျာ။ ဘာလဲတော့သေချာမသိဘူး။ အစ်ကို အလေးအနက်စဉ်းစားပြီးရေးထားတာလို့ ညီထင်တယ်။
I FELT IT THAT I EVEN FORGET MY BREATH !!
BRILLIANT EXPRESSIONS & CREATIVE ART YOU MADE.
I KNOW IT IS NOT AS EASY AS IT LOOK TO WRITE AND DELIVER SUCH THINGS.
I DO REALLY APPRECIATE YOUR WORK chiT.
YOU R MY ROCK!
အင်း.... Blackရေ ငါတော့ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးရသွားတယ်။
အတွေးအရေးတွေ အရမ်းကောင်းနေပါလားဗျ အခန်းကျဉ်းထဲက ထွက်ပေါက်မယ့်နေသော သူတွေအများကြီးထဲမှာ ကျနော်လည်းပါတယ်း)
ဘယ်မှာလဲ ( ထွက်ပေါက် ၊ နားခိုရာ ၊ဖြေသိမ့်မှုနောက် ကြည်နူးစရာ ) ဆိုတော့ကာ ...း)
ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့တိုင်း တကယ်ကို ထွက်ပေါက်ပါပဲကွာ...း)
ထွက်ပေါက်မဲ့နေသော ဘ၀တွေလဲ ထွက်ပေါက်ရရှိကြပါစေရှင်...။
ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ မမြဲခြင်းတွေ ခြေရာခြင်းထပ်နေပုံများ…။ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ အကြိမ်ကြိမ်စစ်ခင်းတော့…။ ကြားထဲ က ငါ့ခံစားချက် စစ်မြေပြင်ပဲ စုတ်ပြတ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်..။...........
blackdream ကတော့ blackdream ပီသနေလိုက်တာ။ ကောင်းတယ်။ သေခြင်းတရားက လွတ်မြောက်ရာ လမ်းတစ်ခုတော့
တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ၀င်္ကဘာလို လမ်းမျိုး...
မလျှောက်တတ်ရင် ဘယ်တော့မှ လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော့် ။ :)
ငါတယုတယ မွေးထားတဲ့ ပုပ်သိုးနေတဲ့ အတိတ်တွေထဲက “လောက်” ကောင်တွေနဲ့…။
ထွက်ပေါက်ရှာနေသော ကိုအနက်ရောင်ရေ ထွက်ပေါက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုပေါ်မှာလဲ မူတည်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လုံလ၊၀ိရိယတွေပေါ့
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ပါရှင်။ အရာအားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။
မွန်း၂ကြပ်၂ကြီးနဲ့ကို ဖတ်သွားတယ်ကွာ။ ငါတို့လည်း တခါတလေတော့ မွန်းကြပ်တယ်။ ထွက်ပေါက်တော့ ပေးရဲသေးဘူးကွ။ ကြောက်တယ် မိန်းမလဲယူရသေးဘူး :D
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ အသက်ရှူတောင်ကြပ်လာတယ်။ တကယ်ကို ကောင်းတယ်။ ဖယ်ရင်းနဲ့၁၉၈၄ ၀တ္ထုထဲက နောက်ဆုံးပိုင်းကို သွားသတိရမိတယ်။ လှောင်ပိတ်နေတဲ့ အခန်းမှ အားလုံးအမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်လျက်ပါ။
၁၀ နှစ်သားလောက် သက်တမ်းရှိတဲ့ “အထီးကျန်ခြင်း” တစ်ကောင်လည်း ငါ့ဘေးမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလေရဲ့…။
မြန်မြန် လွတ်ပါစေ ဗျာ :P
သိပ်ကို လှပါတယ် အရေးအသားလေး ကျမဖတ်ချင်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေဘဲ
သယ်ရင်းရေ... အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ... အရမ်းကြိုက်တယ် ဒီပို့စ်ကို ...။
ငါလား ? မပြောက်ရသေးပါဘူးကွာ ... အခုမှ စဉ်းစားနေတုန်း :D ../
ထွက်ပေါက်တွေမဲ့နေရင်တော့ ဘဝကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ခါးပစ်လိုက်တော့မယ် ညီလေးရေ
ကံကြမ္မာကတော့ ဝေဒနာတွေကို သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးပေးပို့ခဲ့တာပဲ ..
ဒါပေမယ့် .. စေတနာတွေနဲ့သာဆိုရင် ..
သေချာရေရာတဲ့ ထွက်ပေါက် တခုကို အမှန်တကယ် တွေ့မှာပါ ညီရာ ..။
မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ထွက်ရပ်ကို ပေါက်မြောက် အောင်မြင် ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေကွာ ..။
good and odd work, bro